खास के छ आर्यनको प्लान ? - Naya Patrika
खास के छ आर्यनको प्लान ?
अभिनेता आर्यन सिग्देल सुस्ताएको धेरै भयो । एकताका उनको डिमान्ड निकै थियो, अधिकांश निर्माता, निर्देशक आर्यनलाई नै लिन खोज्थे । तर, आर्यन भने ‘स्क्रिप्ट हेर्छु’ मात्र भन्दैनथे, क्यामेराम्यान को हुन्छदेखि हिरोइनसम्मको चासो दिन्थे । उनले ‘स्क्रिप्ट हेरेर’ अभिनय गरेका सबै नै फिल्मबाट निर्माता डुबेका छन् । उदाहरण दिनुपर्दा, आई एम सरी, मेरो लभ स्टोरी, के यो माया हो, मधुमास, नाइके, माला, अलबिदा, आवेग आदि ।
सुरुका दिनमा निकै तौलिएर फिल्म छान्ने गरेका आर्यन अन्ततः ‘आ’को बात छैन’मा पुगे । अर्थात् उनले माला, अलबिदा, आवेगजस्ता फिल्ममा अभिनय गरे, जसको प्रचारमा उनी आफैँ सहभागी भएनन् । आफैँले निर्माण गरेका दुई फिल्म नोभेम्बर रेन र क्लासिकले आर्थिक मुनाफा नदिलाएपछि उनी निराश त भए नै, उप्रान्त बाहिरी ब्यानरका फिल्म नगर्ने नै घोषणासमेत गरे ।
तर, अहिले उनी रेखा थापाको रुद्रप्रिया फिल्ममा अभिनय गर्दै छन् । जबकि रेखासँग उनको कसले चोर्यो मेरो मनपछि नै बोलचाल बन्द थियो । कसले चोर्यो मेरो मनमा रेखाले आफूलाई मात्र हाइलाइट गरेको, आफ्नो सिंगल पोस्टर छपाएर फिल्म हिट गराएकोदेखि लिएर रेखासँग फिल्म खेल्दा अनेक तिकडम गरेर उनले आफूलाई छायामा पार्ने भएकाले पनि आर्यनले रेखालाई निको मान्दैनथे । रेखा पनि के कम ? आफैँले हिरोको रूपमा डेब्यु (किस्मत) गराएको केटोले आफैँलाई टेर्न छोडेपछि उनमा इगो पलाउनु स्वाभाविकै मान्न कर लाग्छ । तर, समयले कोल्टे फेर्यो । आर्यनका फिल्म धमाधम फ्लप भए । रेखाका पनि तथास्तु, जाऔँ हिँड पोखरा, रामप्यारीदेखि पलाँससम्मले व्यावसायिक सुखद अनुभूति गराएनन् । त्यसपछि अन्ततः आफूहरू मिल्नुको विकल्प उनीहरूले देखेनन् क्यारे । आर्यन पनि मौकाको प्रतीक्षामा थिए । रेखालाई पनि आर्यनको आवश्यकता पर्यो । फलस्वरूप उनीहरू सात वर्षपछि फेरि सँगै काम गर्दै छन् रुद्रप्रियामा । अहिले आएर उनीहरूको ‘ड्रामाबाजी’ चलिरहेको छ– हाम्रो व्यावसायिक सम्बन्ध कहिल्यै धुमिल भएको थिएन भन्दै ।
अलबिदा, नाइके र आवेग लाइन लागेर फ्लप भएपछि आर्यनले बाहिरी ब्यानरका फिल्म गर्दिनँ, आफैँ फिल्म बनाइरहन्छु भनेर घोषणै गरेका थिए । त्यसपछि उनले सुवास गिरीसँग मिलेर क्लासिक फिल्म बनाए । क्लासिकले पनि घाटा दिलायो । निर्देशक दिनेश राउतले कहिल्यै आर्यनको साथ छोड्दैनथे । तर, अहिले आएर उनले पर्व फिल्मबाट साथ छोडे । दिनेशले मात्र होइन, आर्यनका जिक्री निर्माता साथी सुवास गिरीले पनि छोडे । एकताका आर्यन हसन खानसँग निकै निकट थिए । हसनको डेरा आर्यनको दोस्रो घर थियो । तर, अलबिदाको असफलतापछि उनीहरूबीचको दोस्तीयारी समाप्त मात्र भएन, बोलीचाली नै बन्द भयो । हसनले अहिले दोस्रो फिल्म निर्माण गरेका छन्, रोमियो । आफैँ हिरो छन् । पहिला वैशाख २९ मा रिलिज हुने घोषणा गरिएको भए पनि स्थानीय चुनावको कारण देखाई स्थगित गरियो । अब रोमियो कहिले आउँछ हलमा, यो निर्माता हसन स्वयंलाई थाहा छैन ।
बाहिरी ब्यानरका फिल्म नै खेल्दिनँ भनेका आर्यनले अन्ततः लुकेर फिल्म खेले– छक्का पन्जा । आर्यनको सुपरहिट फिल्म कुन छ ? भनेर चोकतिर चर्चा चल्दा कतिपयले छक्क पन्जा भनेर उडाउने गरेका छन् । छक्का पन्जामा त अभिनय गरे आर्यनले, तर उनलाई प्रचार–प्रसारमा कहीँ ल्याइएन । हलमा फिल्म हेरेपछि मात्रै दर्शकलाई थाहा भयो, छक्का पन्जामा आर्यन पनि छन् भनेर । आर्यनको अवस्था यस्तो देखियो कि उनी अहिलेका राजेश हमाल हुन् । हमाल अर्थात्, एक समय पोस्टरमा हमालको टाउको राखेर मात्र पनि फिल्म हिट गराइन्थ्यो । उनलाई एक सिन अभिनय गराएर प्रचार ठूलो गरिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय हमाललाई मुख्य भूमिकामा अभिनय गराए पनि प्रचार–प्रसारमा कहीँ देखाइँदैन । फिल्म हेरेपछि मात्रै हमालको उपस्थिति थाहा हुन्छ । यस्तै देखिए आर्यन छक्का पन्जामा ।
तर, रुद्रप्रियामा भने आर्यन रुद्रको शीर्ष भूमिकामा भएको बताइन्छ । कतिपय फिल्मकर्मीले भने रेखा इखालु स्वभावकी भएकाले सुटिङ सकिएपछि फिल्मको नामबाट रुद्र हटाउन सक्ने सम्भावना पनि अनुमान गर्छन् । तर, पछिल्लो समय आफू, आर्यन, जीवन लुइँटेलजस्ता हिरोको क्रेज उस्तै भएकाले अब रेखाले उत्ति साह्रो चलाखी नगर्ने ठोकुवा पनि एकथरीको छ ।
आर्यनले फिल्म खेल्न छोडेको एक वर्ष भइसकेको छ । अहिले फिल्म बनाउन खोज्ने अधिकांशले दयाहाङ राई र सौगात मल्ल लिने प्रयास गर्छन् । दया र सौगात नभएपछि मात्रै अरूहरूको कुरा चल्ने गर्छ । अहिले साँच्चै नै हिरोको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा के आर्यन फेरि जुर्मुराउलान् ? के उनी रुद्रप्रियापछि पहिलाझैँ निरन्तर फिल्म खेल्लान् ?
‘अहँ, म पहिलाजस्तो निरन्तर फिल्म गर्दिनँ,’ अझै पनि गल्दैनन् आर्यन, ‘रुद्रप्रियापछि मेरा आफ्नो ब्यानरका दुइटा फिल्म छन्, ती गर्छु । पहिला साइन गरेको श्याम अर्यालको मरिना छ, त्यो गर्नैपर्छ । बाहिरी ब्यानरका फिल्मचाहिँ गर्दिनँ म ।’
बारम्बार बाहिरी ब्यानरका फिल्म गर्दिनँ भन्ने आर्यन दीपक–दीपा, रेखा, श्यामको फिल्मलाई चाहिँ घरकै ब्यानर ठान्छन् क्यारे । त्यसैले त उनले अतिथि भूमिका पनि छोडेनन् । गुपचुपमै काम सकाए । अब रुद्रप्रियामा भने उनी खुलेरै आउने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, उनको ‘मुड चेन्ज’ नहोला भन्नचाहिँ कसरी सकियो र ?
सन्नीलाई हेर्न अाएकाे भिडमा पुलिसको लाठीचार्ज
फिल्मकर्मीको एक स्वर “सेन्सर बोर्ड खारेज गर्नुुपर्छ”
भिलेनमा जम्दै हिरो बन्न आएका ज्याक